Natiijooyinka Kobaca Canopy-da ee Saddex-biloodlaha ah ayaa imanaya. Maxaan filan karnaa? • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Natiijooyinka Kobaca Canopy ee saddexdii biloodba mar soo socda. Maxaan filan karnaa?
maqaal by daroogada August 6 2019
Kobaca Canopy (WEED) (CGC) wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijooyinkiisa rubuc koowaad ee sanadka maaliyadeed ee 2020 bisha Agoosto. Kaqeybgalayaasha suuqa ayaa jeclaan lahaa inay arkaan sida ay shirkadda cannabis u sameysay rubucan.
1 Falanqeeyayaasha waxay ka fiiriyaan Kobaca Canapy
2 Qeybaha kale
3 Waxaan sugeynaa
Falanqeeyayaasha waxay ka fiiriyaan Kobaca Canapy
Saddexdii bilood ee hore ee sannad-maaliyadeedka 2020, falanqeeyayaashu waxay filayaan in dakhliga Canopy Kobaca uu si caadi ah uga kobocdo 94 milyan oo Canadian ah oo leh 17% ilaa 110 milyan. Waxay filayaan in xaddiga guud uu sidoo kale kasoo kori doono 15,9% illaa 22,65%. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale filaya in isbeddelka Aurora Cannabis (ACB) ee rubuc soo socda uu ku dhici doono 75% illaa $ 114 milyan oo doolar.
Xadka la hagaajiyay ee Canopy waxaa laga yaabaa inay u sabab tahay isku darka alaabta soo fiicnaata iyo tayaynta qiimaha wax soo saarka. Shirkadaha Cannabis, oo ay ku jiraan Canopy, ayaa ballaariyey awoodoodii sanadkii hore. Kordhinta awooda ayaa loo tarjumi karaa dhaqaala ahaan. Markay shirkaduhu soo saaraan waxyaabo badan, qiimahiisu halkii garaam ee cannabis waa inuu hoos udhacaa.
Aphria (APHA) waxay dhowaan soo bandhigtay natiijooyinka rubuc-afaraad ee sannad-maaliyadeedka 2019 iyo qarashkooda wax soo-saarkoodu sidoo kale hoos ayuu u dhacay. Kharashaadka hawlgalka halkii graam ayaa si isdaba joog ah hoos ugu dhacay 1,48 doolarka Kanada halkii gram ilaa 1,35 doolarka Kanada. Wadarta qiimaha halkii garaam ee shirkadda ayaa hoos uga dhacay 2,86 Canadian dollars halkii gram illaa 2,35 Canadian Canadian. Natiijooyinkaas soo ifbaxay awgood, wadarta guud ee shirkadda ayaa si isdaba joog ah uga soo hagaagtay 23% illaa 28%.
Falanqeeyayaasha ayaa filaya Kobaca Canopy inuu soo sheego koritaanka 17% iyo xaddiga guud ee la hagaajiyay, laakiin waxay filayaan in EBITDA ay casaan sii ahaato. Waxay filayaan in khasaaraha qayb kasta oo ka mid ah shirkadda ay ku sii fiicnaato illaa $ 1000 doollarka Kanada ee loo yaqaan '0,40 Canadian dollars'. Kharashaadka fidinta waxay culeyska saari karaan natiijada shabaqa.
Kobaca Canopy waxa kale oo uu qorshaynayaa in uu soo bandhigo badeecooyinka qiimaha lagu daray dabayaaqada sanadkan, iyada oo rajaynaysa in Kanada ay sidoo kale sharciyayso cuntooyinka iyo cabitaannada xad-dhaafka ah. Alaabooyinkani waxay balaadhiyaan qiimaha lagu daray, oo ay ku jiraan shokolaatada, cabitaannada lagu shubay iyo vapes - waxayna u taagan yihiin marxaladda xigta ee alaabta xashiishadda.
Ka akhriso faahfaahin dheeraad ah MarktRealist (EN, ilaha)
saamiyadamaalgelintaCanadacannabismaaliyad ahaansharci-dejintadaawada cawskaMaraykankabeerista cannabis
Shan talo oo akhlaaq leh oo ku saabsan sigaar cabidda marijuanaada asxaabta
Dhibaatooyinka ku saabsan gaaritaanka org org? Sayniska ayaa sheegaya in haramaha sigaar cabista ay caawin karto
Bandhiga ganacsiga khadka tooska ah ee alaabada xashiishadda ayaa laga bilaabay Yurub
Sharciyeynta xashiishadda Kanada waxay ku kacday $43,5 bilyan...
Xashiishadda sharciga ah waxay ku kacaysaa 55 bilyan oo doollar ...
Tilray wuxuu soo sheegay $ 53,7 milyan iibinta xashiishadda ee…